မုန်တိုင်းလား၊ ဘယ်လိုပုံသွင်းလဲ ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မုန်တိုင်းတွေကြိုက်တယ် ကောင်းကင်ကို Cumulonimbus တိမ်များဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောအခါကျွန်ုပ်သည်အံ့သြစရာကောင်းသည်ကိုမခံစားနိုင်ပါနေမင်းကိုချစ်မြတ်နိုးသူများကြယ်ပွင့်ဘုရင်ကိုသယ်ဆောင်စဉ်ခံစားရသည့်ခံစားမှုနီးပါးသည်ရက်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သင်သူတို့ကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲပြောပြမယ့်အရာအားလုံးကို သင်စိတ်ဝင်စားမှာ သေချာပါတယ်။ မုန်တိုင်းက ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တခြားအရာတွေလဲဆိုတာ ရှာဖွေပါ။
3.2 သဲ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်
3.3 နှင်း သို့မဟုတ် မိုးသီး
3.4 အရာဝတ္ထုများနှင့် သက်ရှိသတ္တဝါများ ၏
မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မတူညီသော အပူချိန်တွင်ရှိသော လေထုထည်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော လေထုထည်များ ရှိနေခြင်းဖြင့် လက္ခဏာရပ်တစ်ခု. ဤအပူကွာခြားမှုသည် လေထုကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီး မိုး၊ လေ၊ လျှပ်စီး၊ မိုးကြိုး၊ လျှပ်စီးများနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသီးများလည်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များက မုန်တိုင်းကို အသံကြားနိုင်သော မိုးခြိမ်းသံကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သော တိမ်တိုက်အဖြစ် သတ်မှတ်သတ်မှတ်ထားသော်လည်း၊ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မိုး၊ ရေခဲ၊ မိုးသီး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ဆီးနှင်း သို့မဟုတ် လေပြင်းများ နှင့် ဆက်နွယ်နေသော အခြားသော ဖြစ်စဉ်များလည်း ရှိသေးသည်။ အမှုန်အမွှားများကို ဆိုင်းထိန်း၊ အရာဝတ္ထုများ သို့မဟုတ် သက်ရှိသတ္တဝါများပင် သယ်ဆောင်နိုင်သည်။
၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်းပြောလျှင်, ငါတို့သည်သံသယမရှိဘဲ, ငါတို့သည်၎င်း၏အကြောင်းကိုပြောဆိုရန်ရှိသည်။ ဒေါင်လိုက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသည်မိုclouds်းတိမ်ကိုစီး ထုတ်လုပ်သည်။ ဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည်9မှ 17 ကီလိုမီတာအထိအထင်ကြီးစရာကောင်းသောအမြင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။. ထိုနေရာသည် ထရိုပိုစဖီးယားနှင့် စထရာတိုစဖီးယားကြား အသွင်ကူးပြောင်းရေးဇုန်ဖြစ်သည့် tropopause တည်ရှိရာနေရာဖြစ်သည်။
မုန်တိုင်းတစ်ခု၏ လှုပ်ရှားမှုစက်ဝန်းတွင် အများအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှု၏ကနဦးအဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့် ရင့်ကျက်မှုအဆင့်နှင့် တစ်နာရီ သို့မဟုတ် နှစ်နာရီဝန်းကျင်ခန့် ကြာမြင့်သည့် ပျက်စီးယိုယွင်းမှု၏ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်ချိန်တည်းမှာ convective cells အများအပြားရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့် ဖြစ်စဉ်သည် ရက်များအထိ ကြာရှည်နိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ မုန်တိုင်း supercell အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ကြီးမားသော လှည့်ပတ်နေသော မုန်တိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အတက်အဆင်း ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်နေသော ရေစီးကြောင်းများနှင့် ပေါများသော မိုးရွာသွန်းမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မုန်တိုင်းလိုပါပဲ 😉 အလယ်ဗဟိုတစ်ဝိုက်တွင် လှည့်ပတ်နေသော လေလှိုင်းများ အများအပြားပါ၀င်ခြင်းဖြင့် ၎င်းသည် ရေထွက်ပေါက်များနှင့် လေဆင်နှာမောင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ဒါမှ မုန်တိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်။ low-pressure system သည် high-pressure တစ်ခုနှင့်နီးစပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပထမတစ်မျိုးမှာ အပူချိန်နိမ့်ပြီး ကျန်တစ်မျိုးမှာ ပူနေမည်ဖြစ်သည်။ ဤအပူဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် စိုစွတ်သောလေထု၏ အခြားဂုဏ်သတ္တိများ အတက်အဆင်း ရွေ့လျားမှုများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အစပြုသည်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း သို့မဟုတ် လေပြင်းများကဲ့သို့ လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှုကို မေ့မထားဘဲ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း သို့မဟုတ် လေပြင်းများကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်နိုင်သည့် သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်မကြိုက်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ထုတ်ပေးခြင်း။ လေ၏ပြိုကွဲဗို့အားရောက်ရှိသောအခါ၊ ထိုအချိန်၌ လျှပ်စီးကြောင်းထုတ်ပေးသောအခါတွင် လျှပ်စီးကြောင်းပေါ်လာသည်။ အခြေအနေမှန်လျှင် လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် မိုးခြိမ်းသံများ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။
အားလုံးကို အနည်းနှင့်အများ တူညီစွာ ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးအစားများစွာကို ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ-
ဒါဟာ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲ။ လျှပ်စီးလက်ခြင်းနှင့် မိုးခြိမ်းခြင်း၏ လက္ခဏာရပ်ဖြစ်သည်။ပထမ က ထုတ်တဲ့ အသံတွေ ၊ ၎င်းတို့သည် Cumulonimbus တိမ်တိုက်များမှ အစပြုကာ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများနှင့်အတူ တစ်ခါတစ်ရံ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၊ ဆီးနှင်းများ သို့မဟုတ် မိုးသီးများပါဝင်သည်။
သဲ သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်
၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အပူပိုင်းမိုးနည်းရပ်ဝန်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြောက်သွေ့သောဒေသများတွင်ဖြစ်ပွားသည်။ လေသည်တစ်နာရီ ၄၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်အမှုန်အမြောက်အများကိုရွေ့လျားစေသည်အလွန်ဝေးလံသောတိုက်ကြီးများတွင်အပြီးသတ်နိုင်ခြင်း။
နှင်း သို့မဟုတ် မိုးသီး
မုန်တိုင်းသည် ဆီးနှင်း သို့မဟုတ် မိုးသီးပုံစံဖြင့် ရေကျသည့် မုန်တိုင်းဖြစ်သည်။။ ၎င်း၏ပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှင်းများအားပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောနှင်းများအကြောင်းပြောဆိုနိုင်သည်။ လေပြင်းတိုက်ခြင်းနှင့်မိုးသီးများနှင့်အတူလိုက်ပါလာသောအခါ၎င်းကိုနှင်းများဟုခေါ်သည်။
အရာဝတ္ထုများနှင့် သက်ရှိသတ္တဝါများ ၏
၎င်းတို့သည်လျင်မြန်စွာလှည့်ပတ်စီးဆင်းသွားသောမြေ၊ ပင်လယ်၊ ရေကန်သို့ဆင်းသက်လာသောတိမ်တိုက်များဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ လေဆင်နှာမောင်းသည်ရေနှင့်မြေပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောလေဆင်နှာမောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ရေသည်အလယ်အလတ်သို့ရောက်သွားသည်။ ယခင်တည်ရှိမှုတည်ရှိမှုသည်လေအားဖြင့်အချင်း ၂ မှ ၁၀ ကီလိုမီတာရှိသောလေပြင်းမုန်တိုင်းတစ်ခုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်လေထုအတွင်းရှိအရှိန်ပြင်းစွာစီးဆင်းသောမုန်တိုင်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်သောကြောင့်အမြင့်ဆုံးလေအားဖြင့် ၅၁၀ ကီလိုမီတာနှင့်အမြင့်ဆုံးပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဆုံးစွန်သောကိစ္စရပ်များတွင်၎င်းတို့သည်ကြီးမားသော cumulus တိမ်များ၏အောက်ခြေတွင်ရှိပြီး၎င်းတို့သည်အလွန်ပြင်းထန်သော (လေပြင်းတိုက်နှုန်းမှာ ၁၁၆km / h) ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်အနိမ့်ဆုံးအဆုံးသည်ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပြီးအနိမ့်အား cumulonimbus cloud ဖြင့်အမြန်နှုန်းဖြင့်လှည့်နေသောလေထု၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်သည်။။ လည်ပတ်မှုအရှိန်နှင့်၎င်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောပျက်စီးမှုများအပေါ်မူတည်ပြီး၎င်း၏လေပြင်းတိုက်မှုသည် 60-117Km (F0) သို့မဟုတ် 512 / 612km / h (F6) အထိရှိနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » မုန်တိုင်းဆိုတာဘာလဲ၊
ဝါး lemur သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းမှအစာငတ်နေသည်